FARIHIN’ I KINKONY : Nandrarahana zanaka tilapia 35000 isa ny herinandro lasa teo
Nanatanteraka fandrarahana zanaka tilapia miisa 35 000, ao amin’ny farihin’i Kinkony ny sampan-draharahan’ny jono sy ny harena anaty rano tamin’ny herinandro lasa teo. 6 novembre 2018
Izany no natao dia mba hampitombo ny taranaka trondro sy ny vokatra azo rehefa misokatra ny fotoam-panjonoana. Hihidy manko ny jono an-dranomamy manomboka ny 15 desambra izao, mandritra ny fotoana voafetra, mba hahafahan’ireo zanaka trondro mitombo taranaka sy ahafahan’ireo mponina manodidina mitrandraka maharitra ny farihy.
Hita mantsy fa tsy mitsahatra mihena ny vokatra ary misy karazana trondro fahita fahiny sy nampalaza ireo farihy ireo, efa lany taranaka ankehitriny. Tsinjovina ny taranaka fara aman-dimby mba hisian’ny fitrandrahana maharitra sy mateza.
Mandritra izany, tsy azo alaina ny trondro latsaky ny 7 santimetatra, araka ny nambaran’ny talem-paritry ny jono eto Mahajanga ary tsy azo anjonoana na anaratoana ny farihy herinandro aorian’ny nandrarahana ireo zanaka tilapia ireo. Mirefy 13 900ha ny farihin’i Kinkony ary mamelona olona maro.
Tratran’ny mpifaninana taminy nangala-bato i Nepatraiky Rakotomamonjy KANDIDA DEPIOTE IHOSY (228) 12 juin 2019 Nodimandry teo amin’ny faha-63 taonany i Jean Robert VERY OLOMANGA ANTSIRANANA (227) 12 juin 2019 Miaramila miisa 34 naiditra am-ponja vonjimaika HETSIKA FAMPANDRIANA FAHALEMANA (198) 12 juin 2019 Saron’ny zandary tao an-tranony ireo poketran’olona voaendaka JIOLAHY RAINDAHINY TRATRA TENY ITAOSY (169) 11 juin 2019 Mandà ny endrika tsindry rehetra atao aminy ny Hcc VOKA-PIFIDIANANA OFISIALY (161) 11 juin 2019 Naiditra am-ponja vonjimaika eny Antanimora LEHILAHY TRATRA NANGARONA NY PAOSIN’ NY NAMANY (152) 13 juin 2019